नुहाउँदा नगर्नुहोस् यस्ता गल्ती कहिल्यै, फुस्रो छाला निस्किन सक्छ – Etajakhabar
नुहाउँदा नगर्नुहोस् यस्ता गल्ती कहिल्यै, फुस्रो छाला निस्किन सक्छ
ताजा खबर :- धेरै फुस्रो र धेरै चिल्लो दुवै प्रकारका छालाले झन्झट निम्त्याउँछ । फुस्रो छालामा सबैभन्दा बढी समस्या नुहाउँदा निम्तिन्छ । यस्तो छालामा प्राकृतिक तेलको मात्रा निकै कम हुने भएकाले नुहाउँदा झनै नष्ट हुने र फुस्रोपन बढ्ने हुन्छ । अखिर नुहाउने क्रममा फुस्रो छालामा हुन सक्ने गल्ती के होलान् ? कसरी सुरक्षा गर्ने ? नयाँ पत्रिकामा ब्युटिसियन एलिसा लेप्चाले दिएका सुझाव हामीले पनि यहाँ प्रस्तुत गरेका छाैंः —फुस्रो छाला हुने व्यक्तिले नुहाउँदा साबुन प्रयोग गर्नुहुँदैन । बजारिया रंगीन र बास्नादार साबुन त कुनै पनि हालतमा प्रयोग गर्नुहुँदैन । किनभने साबुन जति बास्नादार हुन्छ उति नै केमिकल मिसाइएको हुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । बरू साबुनको सट्टा नुहाउनुअघि घ्युकुमारी र निमका घरेलु प्याक प्रयोग गर्न सकिन्छ । फुस्रो छालामा हुने घाउखटिराको सम्भावनालाई यस्ता प्याकले रोक्छ । त्यसैगरी हनी प्याक, मह र दहीको प्याक पनि राम्रो हुन्छ ।
—फुस्रो छाला हुनेले नुहाउँदा पानी धेरै चिसो र धेरै तातो प्रयोग गर्नुहुँदैन । यी दुवै किसिमका पानीले छालाको फुस्रोपन झनै बढाउँछ । अझ तातोपनी बढी हानिकारक हुन्छ । यसले छालाको प्राकृतिक चिल्लो काट्ने गर्छ । बरु स्टिम बाथ लिँदा राम्रो हुन्छ । त्यसैगरी नुहाउने क्रममा प्राकृतिक तेल जोगाउँदै थप तेल पूर्ति गर्न पानीमा गुणस्तरीय तेल मिसाएर नुहाउन सकिन्छ । एक बाल्टिन पानीमा चार–पाँच थोपा जैतुन या बदामाको तेल मिसाएर नुहाउँदा फाइदा गर्छ ।
—फुस्रो छाला हुने व्यक्तिले बढी ध्यान दिनुपर्ने नुहाउने वेला नै हो । यही वेला धेरै गल्ती भइरहेको हुन्छ । यस्ता व्यक्तिले धेरै छिटो–छिटो नुहाउनु पनि राम्रो होइन । पानीले शरीरमा भएको थोरै तैलीय पदार्थ पनि नष्ट गर्ने भएकाले जोगिनुपर्छ । प्राकृतिक तेल नष्ट भएपछि छाला झनै फुस्रो हुन्छ ।
—फुस्रो छाला हुने व्यक्तिले नुहाएपछि मोस्चराइजर प्रयोग नगर्नु अर्को गम्भीर गल्ती हो । नुहाएपछि सबै खालको छालालाई आवश्यक पर्ने मोस्चराइजर फुस्रो छाला भएकालाई त अनिवार्य नै चहिन्छ । पूरै शरीरमा मोस्चराइजर लगाउनुपर्छ । एकपटक मोस्चराइजर लगाउँदा पनि छालाको फुस्रोपन कायम रह्यो भने अर्कोपटक मोस्चराइजर थप्नुपर्छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, फाल्गुण ०९, २०७३ समय: १४:४६:११